Manomana Ny Fihetsiketsehana Bersih 3.0 i Malezia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Avrily 2012 10:05 GMT
Nikarakara Bersih 3.0 Duduk Bantah (hetsika sit-in) ny hetsika ho amin’ny fanitsiana hisian'ny fifidianana (Madio) ny 28 aprily any Dataran Merdeka ao Malezia. Nahitana fitakiana telo ny hetsika.
Setriny avy amin'ny vondrona ihany koa ny hetsika manoloana ny torolalana avy amin'ny Komitin'ny parlemantera nofantenina tamin'ny parlemantera izay manala ny Bersih ho tsy mety.
Mihoatra ny 50000 ireo olona nanao fihetsiketsahana [teny malagasy] tao amin’ny araben’ny Kuala Lumpur tamin'ny taon-dasa, nandritra ny hetsika Bersih 2.0. Fihetsiketsehana nenti-nanery ny governemanta hanaiky ny fitakiana [mg] hisian'ny fanitsiana ny fomba fifidianana.
Nivadika ho herisetra [mg] ny fihetsiketsehana milamina tamin’ny taon-dasa raha naparitaky ny polisy ny mpanao fihetsiketsehana milamina. Hitantsika eto ambany amin’ity ny lahatsary fanomanana ny Bersih 3.0 izay mampiseho hetsika sasantsasany nandritra ny hetsika Bersih 2.0 tamin’ny herintaona.
Mamintina ny fahasorenan'ny Bersih ihany koa i Dahlia Martin mikasika ny torolalana momba ny fanitsiana ny lalam-pifidianana nalefan'ny parlementa.
Nanao fandinihana i Dr. Ong Kian Ming izay nanontany ny amin’ny fahatomombanan'ny lisi-pifidianana.
Nanome hevitra ny Vaomiera misahana ny fifidianana i Khoo Kay Peng mba hijery akaiky ny fitarainana nataon’ny Bersih.
Jacqueline Ann Surin namaly ny fanakianana sasany entina hanoherana ny mpikarakara ny Bersih.
Mbola miara-mandrindra amin'ny polisy amin'ny toerana ivoriana ny Bersih 3.0. Lasa hetsika manerantany ihany koa ny Bersih fa misy hetsika fanohanana ihany koa any amin'ny tanàna 41 any amin'ny firenena 14.